Ballparker: Mamorona tombana amin'ny fanamorana | Martech Zone
Alarobia, Septambra 17, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
The sehatry ny fampivoarana ny varotra mipoapoaka ny fitomboany, miaraka amin'ireo orinasa marobe izay manaiky fa niova somary niova ny asan'ny varotra nandritra ny taona maro. Amin'ny fotoana ahatongavan'ilay vinavina aminao dia efa nanadihady anao sy ireo mpifaninana aminao an-tserasera izy ireo, mahatakatra ny tanjakao sy ny fahalemenao ary te hidina amin'ny tolo-kevitra iray fotsiny.
Sehatra iray amin'ny sehatry ny teknolojia fampandehanana ny varotra ny fanampiana ireo orinasa hanangana sy hizara mora vinavinaina, teny nalaina, tolo-kevitra ary valiny amin'ireo RFP (fangatahana tolo-kevitra). Mihabe ny vahaolana eto, manomboka amin'ny vahaolana amin'ny birao an-tsokosoko izay mifamatotra amin'ny Word, hatramin'ny vahaolana tolo-kevitra misy marika manana fahaiza-manao sy fifanakalozan-kevitra, hatramin'ny vahaolana maivana ho an'ny fanombanana tombatombana.
Ny mpanorina David Calvert dia niasa tao amin'ny indostrian'ny maso ivoho nandritra ny folo taona mahery ary nahita banga teo amin'ny tsenan'ny Ballparker. Ballparker dia sehatra madio tsara, natao manokana hanamboarana haingana sy tsotra ny fizotry ny fanombatombanana ho an'ny asa ho avy. Tanteraka izany amin'ny alàlan'ny fanaovana ny sehatra mety amin'ny fitaovana finday rehetra sy ny solosaina birao. Ny sehatra dia misy foana amin'ny alàlan'ny rahona, mamela ny olona asaina mamorona tombatombana hanao izany mandritra ny tranokala, lavitra ny birao na miverina eo amin'ny latabatr'izy ireo.
Raha vantany vao vita ny tombana dia mety halefa mailaka avy hatrany avy amin'ny fitaovana finday na avela mandra-piverin'ny olona any amin'ny birao. Ballparker koa dia manasongadina fitaovana fanaovana tatitra izay afaka manao fampitahana amin'ireo orinasa hafa amin'ny sehatra na toerana iray ihany, mba hahafahan'ny mpampiasa mahita ny fahombiazany amin'ny orinasa hafa mitovy aminy izay mampiasa ny rafitra ihany koa.
Tags: ballparkerdavid calvertmanombatombana rindrambaikorindrambaiko fanolorana soso-kevitrarindrambaiko mitanisanotsongaina
Ny lakilem-pifandraisana 7 ho an'ny varotra madinidinika sy marketing